आइपीओ तयारीमा रहेका ५ जीवन बिमा कम्पनीको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ? – Esewanews
Home / Headline / आइपीओ तयारीमा रहेका ५ जीवन बिमा कम्पनीको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
आइपीओ तयारीमा रहेका ५ जीवन बिमा कम्पनीको कस्तो छ वित्तीय अवस्था ?
Shivaram Khadka Headline, अर्थ, समाचार Leaveacomment 4440 Views
आइपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेका ५ वटा जीवन बिमा कम्पनीहरुले पनि गत आर्थिक वर्षमा औसतमा राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् । यी कम्पनीहरुको रिजर्भ कोष, जीवन बिमा कोष, खुद बिमा शुल्क लगायत महत्वपूर्ण सूचकमा सुधार भएको छ । पछिल्लो पटक १० वटा नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरुले सञ्चालन अनुमति पाएकामा ५ कम्पनीले आइपीओ जारी गरिसकेका छन् । बाँकी ५ वटाको भने आइपीओ आउन बाँकी रहेको छ ।
यी मध्ये आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स र रिलायब लाइफले आइपीओ जारी गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डमा अनुमति मागिसकेका छन् । बाँकी ३ कम्पनीले आफ्नो वार्षिक साधारण सभाबाट आइपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको भए पनि बोर्डमा निवेदन दिन बाँकी छ । हेरौं, आइपीओ जारी गर्न बाँकी ५ कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ :
सिटिजन्स लाइफको चुक्ता पुँजी धेरै
असार मसान्तसम्म सिटिजन्स लाइफ इन्सुरेन्सको चुक्ता पुँजी अन्य सबै कम्पनीको भन्दा धेरै छ । यसको पुँजी १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । बाँकी सबै इन्सुरेन्सको पुँजी भने १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । सबै कम्पनीको चुक्ता पुँजी गत वर्षकै यथावत रहेको छ ।
रिलायबलको रिजर्भ कोष धेरै
असार मसान्तसम्म आइपुग्दा रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्सको रिजर्भ कोषमा सबैभन्दा धेरै ८४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । रिजर्भ कोषमा भएको वृद्धि प्रतिशतका आधारमा भने महालक्ष्मी लाइफ अघि देखिएको छ । यसको रिजर्भ १२४.४७% ले वृद्धि भएको छ ।
जीवन बिमा कोष सिटिजनको धेरै
सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको जीवन बिमा कोषमा सबैभन्दा धेरै ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसको जीवन बिमा कोषको आकार ११७.८३% ले बढेको हो । यता, रिलायबलको जीवन बिमा कोषमा सबभन्दा धेरै १२०.८९% ले वृद्धि भएको छ । सबै कम्पनीको जीवन बिमा कोषमा सुधार भएको छ ।
खुद बिमा शुल्क आर्जनमा सिटिजन लाइफ अघि
असार मसान्तसम्म सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको खुद बिमा शुल्क आम्दानी सबैभन्दा धेरै ३ अर्ब ४३ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सबैभन्दा धेरै वृद्धि भने रिलयबल लाइफको ८८.०१% रहेको छ । महालक्ष्मी लाइफको खुद बिमा शुल्क आर्जन भने सबैभन्दा थोरै रहेको छ ।
खुद नाफामा रिलायबल अघि, सन नेपालको नाफा घट्यो
आइपीओ जारी गर्न बाँकी कम्पनीमध्ये सन नेपाल लाइफको नाफा मात्र घटेको छ । बाँकी ४ वटै कम्पनीको नाफामा सामान्य सुधार भएको छ । रिलायबल लाइफको नाफा रकम सबैभन्दा धेरै २२ कोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सबैभन्दा धेरै वृद्धि भने महालक्ष्मी लाइफको १७.४९% रहेको छ ।
१८ भाद्र २०७८, शुक्रबार १०:३७